Dhalo Dhalo, Dhalo Khamri Khamri ah, Dhalooyinka Saliida Dhalada ah - Changyou
Shirkadeenu waxay ahmiyad gaar ah siisaa hal-abuurka farsamooyinka farsamada dheeri-ka-shaqeynta ee muraayadaha, waxaana si ballaaran u aqoonsan nahay oo aan ku kalsoon nahay Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo iyo noocyo kale oo khamri caan ah. Maahan oo kaliya keenista suuqa gudaha, wax soo saarkeena waxaa loo dhoofiyay in ka badan 30 dal oo adduunka oo idil ah.
187ml Antique Green Glass Burgundy Dhalo for W ...
150ml yaanyo dheji ketchup maraqa kulul 5 oz woo ...
Din 18 galaas saliida lagama maarmaanka u ah oo xakameynaya ...
Vodka gin whiskey ruuxi ruuxa dhalada galaaska leh ...
Yantai Changyou Glass Co., Ltd waxay in ka badan 18 sano khibrad u leedahay bixinta alaabada dhalada galaaska iyo xalalka xirmooyinka la xiriira. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay daboolayaan noocyada kala duwan ee muraayadaha, oo ay ku jiraan dhalooyinka khamriga, dhalooyinka saytuunka, dhalooyinka biirka, dhalooyinka qurxinta, dhalooyinka sharaabka-jilicsan, dhalooyinka cuntada, galaaska dawooyinka, iwm.
Shirkadeenu waxay ahmiyad gaar ah siisaa hal-abuurka farsamooyinka farsamada dheeri-ka-shaqeynta ee muraayadaha, waxaana si ballaaran u aqoonsan nahay oo aan ku kalsoon nahay Coca Cola, Pepsi-cola, Diageo iyo noocyo kale oo khamri caan ah. Maahan oo kaliya keenista suuqa gudaha, wax soo saarkeena waxaa loo dhoofiyay in ka badan 30 dal oo adduunka oo idil ah. Suuqyadeenna ugu waaweyn waa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Australia, Bariga Dhexe, Afrika, iyo wixii la mid ah ...